Dabere na nyocha ohuru, Apple Watch bụ ngwaọrụ kachasị mma | Akụkọ akụrụngwa
Nhọrọ ndị Apple Watch na-enye anyị mgbe a bịara n'ịkọwapụta ndị agha anyị kwa ụbọchị ma ọ bụ usoro ọzụzụ anyị bụ otu n'ime isi ihe kpatara ndị ọrụ iji zụta ya, ọkachasị Apple Watch Series 2, nke gbakwunyere ihe mmetụta GPS na mgbakwunye na iguzogide mmiri na-asọpụta mmiri ma ọ bụghị na ntanetị dịka ihe atụ gara aga. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere obi abụọ ọ bụla, e bipụtara ọmụmụ na JAMA Cardiology mbipụta nke Apple si smartwatch kwadoro na ọ bụ ngwaọrụ kachasị mma n'ahịa.
Dị ka magazin bụ́ TIME si kwuo, ọmụmụ a emere ya na ndi okenye 50 bu ndi ejikoro na electrocardiogram, ụzọ kachasị mma iji tụọ ọrụ obi taa. Ozugbo ewerela usoro dị iche iche, ndị na-esonye na ọmụmụ ihe ahụ jiri pulsator mee ihe Fitbit HR, Apple Watch, Mine Apha na Basis Peak dị ka nke a tụrụ atụ nke a na-etinye n’igbe.
Ejiri ihe otiti obi mee na-eme nnwale atọ nke ọkwa ọrụ dị iche iche dịka izu ike, ịga ije na ịgba eriri na beltka. Ihe nleba obi bụ ngwaọrụ gosipụtara 99% ziri ezi ma e jiri ya tụnyere nsonaazụ EKG, ihe a ga-atụ anya ya. Na ọnọdụ nke abụọ anyị na-ahụ Apple Watch na izi ezi nke 90% ebe ngwaọrụ ndị ọzọ agafeghị 80%.
Ihe omuma ihe omuma nke eweputara na ule a bu na Ka ike nke ndị agha na-abawanye, ngwaọrụ ndị ahụ na-amalite ịkwụsị akara ngosi n'ụzọ ziri ezi. Iji tụọ pulsations ahụ, ngwaọrụ ndị ahụ na-eburu n'uche ọbara ọbara, ebe ọ bụ na ọ dị elu karịa, ọkụ nke ngwaọrụ ahụ na-agbapụta iji chọpụta ọnụọgụ obi na-agba ọsọ ngwa ngwa ma ngwaọrụ ahụ nwere ike tufuo akụkụ nke kọntaktị na akpụkpọ ahụ, nke na-emetụta nsonaazụ ndị enwetara, yabụ, mgbe ha na-emega ahụ, ndị nrụpụta na-atụ aro mgbe niile ka ha jiri smartwatch jikọtara ya na nkwojiaka iji nweta nha kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Dika nyocha ohuru, Apple Watch bu ihe kachasi nma
Steam na-agbakwunye nkwado ala maka onye njikwa PS4, DualShock 4